News Forex | Uhlaziyo lwezeMali kwiimarike zeMali kunye neFXCC
Ikhaya / malunga / Malunga neFXCC / Company News
Iindaba zeNkampani kunye neZaziso zokuThengisa
I-FXCC iyavuya ukuvakalisa ukuqhubeka kwephulo lethu loPhuhliso
Ngenxa yomdla omkhulu kumkhankaso wethu wokuphromotha, iFXCC iyavuya ukwazisa abaxhasi bethu kunye namaqabane ukuba isibonelelo seBhonus siya kuqhubeka ngo-Oktobha.
Ukukhuthazwa kwebhonasi kuhlose ukuvuza abaxhamli bethu abatsha kunye nabaxhasi bethu abathembekileyo ngokudibanisa ibhonasi yokuqala ye-100% kunye ne-50% Ibhonasi yokuxhaswa kwefomethi nganye eyenziwe ngenyanga! Kwaye oko akusiyo yonke into - kwintengiso nganye eyenza abathengi bethu bafumana iingaphulelo, apho sivuza abahwebi bethu abathembekileyo ngenkokhelo yangempela.
Ngaba ulungele ukusebenzisa izibonelelo zale phromoshini? Cofa apha ukuba uqalise ukuba ungenayo i-akhawunti okwamanje.
Abaxhasi abanalo i-akhawunti kunye neFXCC kwaye banqwenela ukujoyina ukukhuthazwa yamkele naliphi na ixesha lokubiza ibhonasi!
* Nceda ubhekise kwiMigqaliselo neMibandela yeenkcukacha zokukhuthazwa kweBhonus.
I-FXCC iqalisa isayithi elitsha ukufumana abaxhamli be-EU
Njengengxenye yokuqhuba kwethu ukuqhubela phambili ukufikelela kwamanye amazwe kunye nokwandisa inkonzo yethu kubaphulaphuli behlabathi, i-FXCC ivule iwebhusayithi entsha yokurhweba eya kubambisana nabathengi bethu be-EU, okanye abathengi baseYurophu abangathengi kwi-EU Injongo unikeza ukufikelela okulula kwimveliso yethu kunye neenkonzo, ngelixa sigcina indawo ekhuselekileyo yokurhweba kubaxhasi bethu.
Ukuqwalasela inani elikhulayo labathengisi abangena kwimakethe ye-forex, siye sithatha umsebenzi wokuba iimeko ezifanelekileyo zokurhweba, zinikeza izixhobo ezahlukeneyo zokurhweba kunye nemveliso, ngeli gxi ninisa ukukhanya kunye nokunyaniseka ngamaxesha onke.
Ukuba enye yeefemu ezamkelekileyo kunye ezithembekileyo kwishishini, injongo yethu kukuphucula abathengi bethu ukuba bafikelele kwimakethe ye-forex xa bethengiswa nomthengisi olawulwayo.
I-Union Union Ukuhlawula abathengisi be-forex baseTshayina
Sisandul 'ukongeza imali yentlawulo kunye neenkxaso-mali ze-akhawunti ngokusebenzisana neChina Union Pay. Ekudaleni olu lwalamano olutsha sivula isango, ukuvumela abahwebi abatsha nabamava eFX bamazwe aseAsia, njengeTshayina, ukuba bathengise ngqo kwi-FXCC ye-ECN FX.
I-China UnionPay yasungulwa kwi-2002, inkampani sele ikhule ngokuzenzekelayo kwiminyaka elishumi elinesihlanu. I-China Union Ukuhlawula iinqanaba le-3 njengomboneleli wenkonzo yokuhlawula, ngokubhekiselele kwintengo yokuthengiswa kwonyaka, emva kwe-MasterCard kunye neVisa. Ngenxa yokuxhaswa nguRhulumente waseTshayina u-CUP waba ngumboneleli wenkonzo yentlawulo ekhethiweyo kwiibhanki ezine zasekhaya zaseTshayina zasekhaya.
Njengoko owaziwa ngokubanzi kwaye ngokuphindaphindiweyo ebizwa "kwi-Union Pay" okanye "CUP", umboneleli wenkonzo sele ekhuphe amakhadi angamawaka amabhiliyoni ehlabathini jikelele. I-Union Union Pay ngoku yindlela eyamkelekileyo yokuhlawula kumazwe angama-150 kwaye kuba abanikazi bekhadi le-2009 Union bakho banokukwazi ukufikelela kwiinkcukacha zoQhagamshelwano e-UK kwaye basebenzise amakhadi abo ngokurhoxisa lula kulo lonke elaseYurophu.
I-Union Union Yongeza ngokukhawuleza yaba yindlela ekhethiweyo yokuhlawula yasekhaya abahlali baseTshayina ukufikelela kwiimarike zentengiso yamazwe ngamazwe. I-China Union Pay iye yaba yintloko kunye nenxalenye ebalulekileyo yezoshishino zasebhanki zaseChina. Baye badlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni jikelele kwimboni yamakhadi eChina.
Kwi-FXCC sisoloko sizama ukunikela ukuphucula kuzo zonke iinkalo zoshishino lwethu olujoliswe kumxhasi. Ngaloo ndlela siqhubeka siqaphele imboni yezemali kwiindlela ezintsha zokuhlawula i-akhawunti, ukwenzela ukuba abaxhasi bethu baxhamle i-akhawunti yabo ngokukhawuleza, okanye bavule i-akhawunti entsha, ukuze bathengise i-FX ngokusebenzisa iiplati ze-MetaTrader zethu zokusika.